အမှဆေကျခံဖို့ကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီး ထုတျပွနျကွငွောခဲ့တဲ့ Samsung ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျ။ – SoShwe
Home/Tech/အမှဆေကျခံဖို့ကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီး ထုတျပွနျကွငွောခဲ့တဲ့ Samsung ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျ။
အမှဆေကျခံဖို့ကိစ်စနဲ့ပကျသကျပွီး ထုတျပွနျကွငွောခဲ့တဲ့ Samsung ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျ။
So Shwe May 7, 2020	Tech Leaveacomment
Samsung ကုမ်ပဏီဟာ အရညျအသှေးမွငျ့ အီလကျထရောနဈပစ်စညျးတှကေို ထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ တောငျကိုးရီးယားနိုငျငံအခွစေိုကျ အီလကျထရောနဈ ကုမ်ပဏီဖွဈပါတယျ။ Samsung ကုမ်ပဏီရဲ့ ဥက်ကဌဟောငျး Lee Kun-Hee က ပငျစငျယူသှားတဲ့အခါမှာ သားဖွဈသူ Lee Jae-Yong ကို အရိုကျအရာဆကျခံစခေဲ့ပါတယျ။ ဥက်ကဌကွီး Lee Kun-Hee က ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ နှလုံးအမောဖောကျတဲ့ရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
ယခုလကျရှိ Samsung ကုမ်ပဏီရဲ့ ဥက်ကဌဖွဈသူ Lee Jae-Yong က သူ့ရဲ့နရောကို သားသမီးတှကေို လှဲပွောငျးပေးဖို့အစီအစဉျမရှိကွောငျး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဥက်ကဌကွီး Lee Jae-Yong က “ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ကြှနျတျောစဉျးစားနတော အတျောကွာခဲ့ပွီ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ထငျမွငျယူဆခကျြတှကေို ပှငျ့လငျးစှာဖှငျ့ဟဝနျခံဖို့အတှကျ တှနျ့ဆုတျနခေဲ့တာပါ။ စီးပှားရေးလုပျရတာဟာ ထငျတာထကျကို ပိုခကျခဲတယျ ဆိုတဲ့ စကားမြိုးပွောဖို့ကလညျး ကြှနျတျောကိုယျတိုငျကတောငျမှ လူအမြားအားကစြံထားရလောကျတဲ့ အောငျမွငျမှုကို မရရှိသေးပါဘူး။”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
တောငျကိုးရီးယားသမ်မတဟောငျး Park Geun-Hye ရဲ့ကဆြုံးခွငျးနဲ့ ကုမ်ပဏီအောငျမွငျမှုအတှကျ လာဘျပေးလာဘျယူမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ Mr.Lee ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ တောငျကိုးရီးယား စဈဆေးရေးအဖှဲ့ရဲ့ စဈဆေးမှုတှကေိုခံရပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ထိုကျတနျတဲ့ပွဈဒဏျခမြှတျခံခဲ့ရပွီး ထောငျနနျးစံခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဗုဒ်ဒဟူးနမှေ့ာတော့ Mr. Lee ဟာ Samsung ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးက လိုခငျြတဲ့ပုံစံမြိုးကို မထုတျလုပျပေးနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈရကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Mr.Lee က သူ့ရဲ့မှားယှငျးတဲ့လုပျရပျတှကွေောငျ့လညျး တောငျးပနျစကားပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
တောငျကိုးရီးယားနိုငျငံ ဆိုးလျမွို့မှာ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ကငျြးပခဲ့တဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ Samsung ကုမ်ပဏီရဲ့ ဒုတိယဥက်ကဌဖွဈသူ Jay Y.Lee က စီမံအုပျခြုပျရေးမှူးတှရေဲ့ ဝဖေနျအကွံပွုခကျြအရ အောငျမွငျမှုနဲ့ ခိုငျမွဲတဲ့အသကျမှေးဝမျးကြောငျးမှုကို လကျလှဲပွောငျးပေးခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး မသငျ့တျောတဲ့ စကားမြိုးပွောဆိုခဲ့ခွငျးအပျေါ ဝနျခတြောငျးပနျကွောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈမှာတော့ Mr.Lee က ထောငျကနလှေတျမွောကျခဲ့ပမေယျ့ တောငျကိုးရီးယားနိုငျငံပွညျသူတှရေဲ့ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့ခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ သွဂုတျလအတှငျးမှာ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ ဥပဒတေရားရုံးက Mr. Lee ရဲ့အမှုကို ပွနျလညျကွားနာ စဈဆေးဖို့အတှကျ ကွငွောခဲ့ပါတယျ။ Samsung ကုမ်ပဏီက ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေို စီးပှားရေးလုပျငနျး ရရှေညျတညျတံ့ဖို့အတှကျ ဆနျ့ကငျြတာမြိုးမလုပျသငျ့ကွောငျး Mr. Lee က ဝဖေနျအကွံပွုခဲ့ပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျအတှငျးမှာတော့ ကုမ်ပဏီကပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးရဲ့ ပွောကွားခကျြအရ ၂၀၂၀ ခုနှဈ အစပိုငျး ၃ လအတှငျးမှာတော့ အမွတျရာခိုငျနှုနျးတိုးတကျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ရှလြေှ့ောကျမှာတော့ ရောဂါပြံ့နှံ့မှုကွောငျ့ ကမ်ဘာအနှံ့ ကုနျစညျစီးဆငျးမှုတှေ နှောငျ့နှေးခဲ့ရတာမို့ ကုနျပစ်စညျးဝယျလိုအားကဆြငျးမှုတှကေို ဆိုးရှားစှာကွုံတှနေို့ငျရတယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
အမွေဆက်ခံဖို့ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့တဲ့ Samsung ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်။
Samsung ကုမ္ပဏီဟာ အရည်အသွေးမြင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံအခြေစိုက် အီလက်ထရောနစ် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌဟောင်း Lee Kun-Hee က ပင်စင်ယူသွားတဲ့အခါမှာ သားဖြစ်သူ Lee Jae-Yong ကို အရိုက်အရာဆက်ခံစေခဲ့ပါတယ်။ ဥက္ကဌကြီး Lee Kun-Hee က ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ နှလုံးအမောဖောက်တဲ့ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Lee Jae-Yong က သူ့ရဲ့နေရာကို သားသမီးတွေကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဥက္ကဌကြီး Lee Jae-Yong က “ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ပွင့်လင်းစွာဖွင့်ဟဝန်ခံဖို့အတွက် တွန့်ဆုတ်နေခဲ့တာပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ရတာဟာ ထင်တာထက်ကို ပိုခက်ခဲတယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုးပြောဖို့ကလည်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတောင်မှ လူအများအားကျစံထားရလောက်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို မရရှိသေးပါဘူး။”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတဟောင်း Park Geun-Hye ရဲ့ကျဆုံးခြင်းနဲ့ ကုမ္ပဏီအောင်မြင်မှုအတွက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် Mr.Lee ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ တောင်ကိုးရီးယား စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ထောင်နန်းစံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဒဟူးနေ့မှာတော့ Mr. Lee ဟာ Samsung ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကို မထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mr.Lee က သူ့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့်လည်း တောင်းပန်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သူ Jay Y.Lee က စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်အရ အောင်မြင်မှုနဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို လက်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မသင့်တော်တဲ့ စကားမျိုးပြောဆိုခဲ့ခြင်းအပေါ် ဝန်ချတောင်းပန်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ Mr.Lee က ထောင်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပေမယ့် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအတွင်းမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေတရားရုံးက Mr. Lee ရဲ့အမှုကို ပြန်လည်ကြားနာ စစ်ဆေးဖို့အတွက် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Samsung ကုမ္ပဏီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက် ဆန့်ကျင်တာမျိုးမလုပ်သင့်ကြောင်း Mr. Lee က ဝေဖန်အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့ ကုမ္ပဏီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အစပိုင်း ၃ လအတွင်းမှာတော့ အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ရှေ့လျှောက်မှာတော့ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေ နှောင့်နှေးခဲ့ရတာမို့ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုတွေကို ဆိုးရွားစွာကြုံတွေ့နိုင်ရတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous Gigi Hadid ???????? ??????????????????? ? ? ?
Next ?????????????? ??????????????????????? Donald Trump ? ?????????????????????????????
မိုကျခရိုဆော့ဖျပိုငျရှငျကပါ အံ့သွတကွီးဖွဈခဲ့ရဖူးတဲ့ ဒျေါနယျထရမျ့ရဲ့လုပျရပျ။
အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး ဒျေါနယျထရမျ့ဟာ သူ့လကျထကျတုနျးက “American First” ဆိုတဲ့ အမရေိကနျလူမြိုးကွီးဝါဒကို အဓိကလကျကိုငျထားခဲ့ပွီး အမရေိကနျကို ပခုံးခငျြးယှဉျဖို့ ကွိုးစားလာတဲ့ တရုတျနဲ့ ဆကျဆံရေးဖွတျတောကျပဈဖို့အထိကို ရညျရှယျခဲ့သူတဈယောကျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ …